Iyo New Testament Mabhuku eBhaibheri: Kurongwa uye Zvinoreva
Testamente Itsva yeBhaibheri inoumbwa nemabhuku makumi maviri nenomwe, yakanyorwa kazhinji nevaapostora. Testamente Itsva yemagwaro matsvene mabhuku nematsamba akanyorwa mushure mekufa kwaJesu. Ndicho chikonzero nei Testamente Itsva ichizivikanwa sechikamu chechiKristu cheBhaibheri uye ndiwo mabhuku achangoburwa munguva pfupi yapfuura. mazhinji e mabhuku eTestamente Itsva anorondedzera hupenyu nebasa raJesu, saka vanozivikanwa se evhangeri. Testamente Itsva inotanga neEvhangeri yaMateu uye inopera neApocalypse yaSaint John.
Kunyangwe nanhasi pane gakava rakawanda mune mamwe matavi echiKristu pamusoro pekushandurwa kwemamwe magwaro. Mazhinji emabhuku netsamba zveTestamente Itsva zvakanyorwa muchiHeberu kana chiAramaiki. Panogadzirwa mabhuku eTestamente Itsva kune avo vanoti zvimwe zvikamu zvemagwaro ekutanga zvakadarika. Zvisinei, matavi akakura echiKristu senge Chechi yeKaturike anoramba aya mafungiro uye anoti zvese zvakanaka. Nekudaro, vamwe vashoma vanotaura neimwe nzira, asi mazhinji evaKristu anotambira shanduro dzerimwe nerimwe remabhuku makumi maviri nemanomwe.
1 Ndeapi mabhuku eTestamente Itsva?
1.1 Evhangeri ina
1.2 Gare gare mabhuku
2 Kukosha kweTestamente Itsva
2.1 Shanduro dzakasiyana
2.2 Hukama nechitendero
Ndeapi mabhuku eTestamente Itsva?
Testamente Itsva inoumbwa nemabhuku makumi maviri nemanomwe, akanyorwa mushure mekufa kwaJesu. Idzi idzi nhoroondo kana evhangeri yehupenyu nebasa raKristu uye dzimwe tsamba dzekufanotaura senge Apocalypse yakanyorwa naSaint John. Testamente Itsva inozivikanwa sechikamu chechiKristu cheBhaibheri, nekuti ndiJesu anotora kukosha kwakanyanya kubva pachikamu ichi. Neichi chikonzero vamwe ve zvimwe zvitendero zvekunamata muna Mwari mumwe hazvibvume zvikamu zvemagwaro matsva aya.
Muunganidzwa webhuku reTestamente Itsva unotanga ne mavhangeri mana, akanyorwa naMateu, Mako, Ruka naJohane. Vanorondedzera hupenyu nebasa raJesu weNazareta, kubva pakuzvarwa kwake kusvika pakufa kwake uye nekumuka kwake. Evhangeri yakatambanuka ndeyeyaRuka, sezvo iri iri iro rinotaura chikamu chenyaya zvakadzama. Pasina kupokana, mavhangeri ndiwo akanyanya kukosha mabhuku eTestamente Itsva. Iwo anotorwa semabhuku matsvene-bhaibheri, sezvo achitaura nezvehupenyu nebasa raKristu Muponesi. Kupa kwakaita Mwanakomana waMwari hupenyu hwake nekuda kwevanhu.
Gare gare mabhuku
Mushure memavhangeri, makumi maviri nematatu emabhuku akasara anoumba Testamente Itsva. Izvo zvakare zvakakosha uye zvinorondedzera chikamu chemakore ekutanga echiKristu. Aya mabhuku, akanyanya kunyorwa nevaapositori vaJesu weNazareta, anotaura nezvechiKristu seruponeso. Yekutanga yavo pamwe ndeimwe yeakanyanya kukodzera, bhuku iri Mabasa eVaapositori uye zvinofungidzirwa kuti zvakanyorwa nemuApostora Pauro.
Chinyorwa cheanotevera mabhuku eTestamente Itsva:
Tsamba yekutanga kuvaKorinte
Tsamba yechipiri kuvaKorinte
Tsamba yechipiri kuvaTesaronika
Tsamba yekutanga kunaTimoti
Tsamba yechipiri kunaTimoti
Tsamba kuna Firimoni
Tsamba yekutanga yaSaint Peter
Yechipiri Tsamba yaSanta Petro
Tsamba yekutanga yaSanta Johane
Yechipiri Tsamba yaSanta Johane
Tsamba yechitatu yaSanta Johane
Tsamba yaSatani Judha
Apocalypse yaSaint John.
Kukosha kweTestamente Itsva
Mabhuku eTestamente Itsva eBhaibheri anozivikanwa nekukosha kwawo kukuru. Kubva mabhuku aya vanotaura zviitiko zvakakosha muhupenyu nebasa raJesu weNazareta, kubva pakuberekwa kwake kusvika parufu rwake uye nekumuka kwakatevera. Ndicho chikonzero nei, kune chiKristu, Testamente Itsva chiri chikamu chinoyera kwazvo chemagwaro matsvene, maEvhangeri ari iwo anonyanya kukosha. Testamente Itsva inorondedzera zvakare chikamu cheizvo zvakapfuura nemuapositori aJesu kuratidza chiKristu chenyika senzira yeruponeso. Pamusoro peiyo yekupedzisira nhoroondo yekuti mazuva ekupedzisira ehunhu angave sei pachiso chenyika.
Mabhuku eTestamente Itsva ane hunhu hwekunyatsoita uye kutaura zvakananga iro shoko raKristu. Icho chiri chikonzero ichi kuti rimwe nerimwe remabhuku aya rakatora kukosha kukuru mukati meBhaibheri. Mazhinji emapazi makuru echiKristu anoziva mabhuku eTestamente Itsva, semamodeli ekutevera uye nekunzwisisa zvishoma nezve hupenyu hwaJesu. Rimwe nerimwe remabhuku makumi maviri nemanomwe eTestamente Itsva eBhaibheri rine nyaya yakasarudzika uye yakakosha.
Zvinofanira kutaurwa kuti vanhu vekutanga vakashinga kushandura Testamente Itsva kubva muchiLatin kuenda muchiRungu neSpanish vakaurayiwa. Nekuda kweizvozvo, kunyanya, kune hutsinye hweKubvunzurudza kweChechi yeKaturike nevamwe vayo. Nhasi Mabhuku eTestamente Itsva anodudzirwa mumitauro inodarika mazana maviri, iyo inotipa iyo yakajeka pfungwa yekuti inopfuura sei magwaro aya. Iwo makuru matavi eazvino chiKristu, kusanganisira Chechi yeKaturike, anobvuma kuita yakawanda kwazvo shanduro. Sezvo zvichikosha kuti kumatunhu ese epasi vanogona kuziva chikamu chehupenyu nebasa raJesu.
Kwenguva yakareba zvitendero zvakasiyana zvakaita kuti vateveri vavo vatende kuti chitendero chavo ndicho chinogamuchirwa. Naizvozvo, avo vese vanoita zvimwe zvitendero, kunyangwe ivo vachirumbidzawo Mwari, havazogashira ruponeso. Izvo zvisina musoro, sezvo mabhuku eTestamente Itsva achitaura nezveruponeso nekuregererwa, kwete kupiwa mhosva. Idzi nyaya hadzigadziri chero chitendero pamusoro pezvimwe, vanotaura nezvechiKristu senzira yekuwana ruponeso. Pamusoro pezvo, chinzvimbo chayo uye chingokurudzira chete kutevera Jesu kuti uwane nzira yekuparadhiso.
Mwedzi iri muBasque
kudzidziswa » tsika nemagariro » Iwo Mabhuku eTestamente Itsva eBhaibheri
Maguta gumi nemashanu ane vanhu vakawanda muSpain
4 inotaura nezve "Mabhuku eTestamente Itsva eBhaibheri"
Sara Adilia Wechitatu Jiron
Ndira 7, 2019 na9: 55 am
Ruzivo rwakajeka uye rwakakosha kune vedu vedu vanoda kudzidza. Ndinokutendai neruzivo urwu, rwunotipamhamisira uye rwunotiratidza muhupenyu hwedu sevateveri vehama yedu JESÚS🛐
Kukadzi 16, 2019 na9: 02 am
Ndatenda zvikuru neruzivo
Iri kundibatsira kwazvo mukuziva Ishe Jesu
Chikunguru 12, 2019 pa5: 23 pm
Ndinokutendai, ruzivo rwakakura kuti muzive zvakawanda nezvaJesu Kristu Ishe wangu, zvinobatsira kunzwisisa Testamente Itsva zvakanyanya.
Nyamavhuvhu 23, 2019 pa3: 11 pm
chokwadi ndechekuti zvaive zvakanaka asi zvakashaiwa rumwe ruzivo rweevhangeri asi zvimwe zvese zvakanaka